Author Topic: Khusbu Oli accuses Arpan Koirala on the death of Chari, who is Arpan? (Read 3199 times)
« Reply #20 on: August 18, 2014, 11:53:02 PM »
खुश्बु र मैले गाँजा फाँड्यौँ : अर्पण कोइराला
चरीलाई पैसा चाहिएको वेलामा मैले सकिनसकी दिएा । उसले ८५ लाखमा भक्सवागन गाडी किन्न खोज्यो, तर माछापुच्छ्रे बैंकले ३५ लाख रुपैयाा डाउन पेमेन्ट मागेको थियो । त्यो ३५ लाख नै मैले दिएको हो ।
उसले भौसेपाटीमा घर बनाउन थाल्यो । तर खासै पैसा थिएन । ठेकेदारलाई मैले आफौ भेटेर काम कुनै हालतमा नरोक्नू, पैसा चाहिएको वेला मलाई भन्नू भनेको थिए । मैले कहिले लाख, कहिले ५० हजार पनि पैसा दिएर घरको काम अघि बढाइदिए ।
एउटा असल साथीका लागि यति गर्न पाउादा म खुसी नै थिएा । तर त्यति दु:खले बनाएको घर चरीले भोग्न पाएन । खुश्बुलाई दिन उसले प्रहरी अधिकृत माधव थापासाग ऋण लिएको थियो । त्यही पैसा तिर्न उसले थापालाई घर बुझाएको छ भन्ने सुनेको छु । सत्य के हो, खुल्दै जाला ।
चरीको इन्काउन्टरसागै चर्चामा आएका अर्पण कोइराला नेपालमा छैनन्, भारतको एयरटेल नम्बरमा सम्पर्कमा आएका उनले त्रिकोणात्मक प्रेमसम्बन्धबारे कुरा गरे :
तपाईंले दिनेश अधिकारी चरीलाई मार्छु भनेर धम्की दिनुभएको थियो, यता चरी मारिए, तपाईं नेपालको फोन नम्बर पनि अफ छ । भारतीय नम्बरमा मात्र सम्पर्क भयो । यो संयोगमात्र हो कि योजनाबद्ध ?
योजनाबद्ध होइन । मेरो ममीड्याडीलाई लिएर डेढ महिनाअघि नै इन्डिया आएको हुँ । ममलाई थाइराइडको समस्या छ । ड्याडी पनि बिरामी हुनुहुन्छ । गुडगाउँको मेदान्त अस्पतालमा उहाँहरूको चेकअप भएको थियो । फलोअपका लागि आएका हौँ । सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्म यतै बस्छौँ । तबमात्र नेपाल फर्कने योजना छ । चरीको इन्काउन्टर र ममीड्याडीको उपचारमा कुनै सम्बन्ध छैन ।
चरी इन्काउन्टरमा मारिए भन्ने समाचार तपाईंले कसरी सुन्नुभयो ? आफैँले मार्छु भनेको मान्छेलाई पुलिसले मार्दा कस्तो लाग्यो ?
चरीसँग मेरो झगडा भएको हो । उसले पनि मलाई मार्छु भनेको थियो । मैले पनि भनेको थिएँ । त्यो एउटा झगडाको वेला थियो, रिसमा बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्न को हिँड्छ ? कसले सक्छ ? म ढाँट्न सक्दिनँ, म दिनेशलाई प्रहरीले पक्राउ गरोस्, कानुनी कारबाही गरोस् र जेलमा राखोस् भन्ने चाहन्थेँ । तर, तर अकालमै उसको यसरी ज्यान जाओस् भन्ने चाहेको थिइनँ । तर, मैले चाहनु अथवा नचाहनुको अर्थ के छ र ? म दिल्लीमै थिएँ, एकजना साथीले ‘माइरिपब्लिका डटकम हेर त चरीको इन्काउन्टर भएछ’ भन्यो । मैले समाचार हेरेँ । एकैछिनमा अनलाइनमा त्यो समाचार आयो । पछि तस्बिर पनि आयो । चरी एउटा गलत बाटोमा लागेको व्यक्ति हो तर त्यसको अन्त्य यसरी होला भन्ने मलाई लागेको थिएन ।
तर तपाईंले सेतो सारी लगाउनुपर्ला भनेर चरीकी प्रेमिका खुश्बुलाई धम्क्याउनुभएको इमेल त सार्वजनिक भएको छ नि, किन त्यस्तो धम्की दिनुभयो ?
कतिपय इमेल त उहाँ आफैँले पनि बनाउनुभएको छ । कतिपय अवस्थामा मैले गाली गरेको पनि हो । किनकि चरी र खुश्बुले मेरो आठ वर्ष लामो माया लुटे, मेरो सपना लुटे । म त्यतिवेला विक्षिप्त भएको थिएँ । म बिरामी नै परेँ, तर जीवन यस्तै हो, चल्दै जान्छ भनेर मैले आफूलाई सम्झाएको छु । अब मैले गुमाएको माया पाउनु छैन । अगाडि बढ्नु छ । अगाडि बढ्न चरीको जस्तो बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरो त्यो हैसियत पनि छैन ।
खुश्बुसँग तपाईंको माया कसरी बस्यो ?
आठ वर्षअघि म भर्खर लागुऔषध पुनस्र्थापना केन्द्रमा उपचार गराएर निस्किएको थिएँ । सुधारगृहभित्र मेरो स्वभाव र सुधार देखेर नार्कोनन्ले मलाई सचेतना अभियानमा खटाउन थालेको थियो । म वास्तवमा नार्कोनन्को स्टाफको रूपमा काम गर्न थालेको थिएँ । त्यही वेला राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा खुश्बुसँग भेट भयो । हामीले एक–अर्काका फोन नम्बर लियौँ । पटक–पटक भेट्यौँ । उहाँले दुव्र्यसनीलाई सुधार गर्ने अभियानमा लाग्न चाहेको बताउनुभयो । यस्तै अरू केही कार्यक्रममा हाम्रो भेट भयो र सम्बन्ध
तपाईंले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पुर्‍याएको र लाखौँ खर्च गरेर पढाएको पनि भन्नुभएको छ । विवाहअघि नै एउटी युवतीका लागि यति धेरै खर्च किन गर्नुभयो ?
उहाँ निकै ‘ट्यालेन्टेड’ हुनुहुन्थ्यो । म प्रभावित भएँ । मैले राखेको प्रेमप्रस्ताव उहाँले स्विकार पनि गर्नुभयो । त्यसपछि मेरा सुखका दिन सुरु भएजस्तो लाग्यो । आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेँ । उहाँ नै मेरो सबथोक हो भन्ने लाग्यो । उहाँको खुसीका अगाडि मैले आफूलाई अर्पण गरेँ । खुश्बु मेरो घरमा आउने र म उनको घरमा जाने भन्ने सामान्य थियो । दुवै परिवारले एक–अर्कालाई स्विकारिसकेका थिए । खुश्बु मेरो भविष्य हुन् भन्नेबाहेक मलाई केही थाहा थिएन । आफ्नो भविष्यका लागि खर्च गर्नु सबैले कर्तव्य सम्झन्छन्, मैले पनि सम्झेँ ।
खासमा तपाईंले सहयोग गरेको भन्दा पनि दुव्र्यसनको लतबाट खुश्बुले तपाईंलाई उद्धार गरेको प्रसंग पनि आएको छ । सहयोग त आदान–प्रदान भएकै रहेछ नि ?
सम्बन्धमा सहयोग आदान–प्रदान भयो । तर, मलाई दुव्र्यसनबाट उद्धार गर्नुभयो भन्ने उहाँको भनाइ झूटो हो । २००६ मा खुश्बुलाई भेट्दा म दुव्र्यसनी होइन दुव्र्यसनविरुद्ध अरूलाई सचेत बनाउने सामाजिक कार्यकर्ता थिएँ । उहाँ र म नजिकिएपछि पनि केही कार्यक्रम गर्‍यौँ । कीर्तिपुरको डाँडोमा गाँजाखेती हामीले मिलेर फाँडेका हौँ । केही स्कुलमा सँगै गएर प्रेजेन्टेसन पनि दिएका छौँ । यसरी सँगै काम गर्दा हामी झन् नजिकिएका हौँ ।
अनि चरीसँग तपाईंको सम्बन्ध कसरी भयो ?
म साथीभाइलाई भेट्न अन्नपूर्ण होटलमा गइरहन्थेँ । चरी पनि त्यहाँ आइरहन्थ्यो । ऊ डन हो भन्ने मलाई थाहा थियो । तर एक दिन चिनजान गर्दा निकै भलाद्मी लाग्यो । म छक्क परेँ । खुंखार गुन्डा भनेर चिनिएको मान्छे पनि यति भलाद्मी हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा मलाई राम्रै लाग्यो । त्यसैले हामी साथीका रूपमा नजिकियौँ । ऊ मलाई निकै आदर गथ्र्यो । मैले पनि सकेको आर्थिक सहयोग गर्दै गएँ । ऊ भन्थ्यो दाइ भगवान् देखेको त छैन तर तपाईंजस्तै हुन्छन् होला । एक–अर्काको घरमा जाने, पार्टी गर्ने, रमाइलो गर्ने बानीले हामी झन् नजिक भयौँ । त्यो बीचमा उसलाई पैसा चाहिएका वेलामा मैले सकिनसकी दिएँ । उसले ८५ लाखमा भक्सवागन गाडी किन्न खोज्यो, तर माछापुच्छ्रे बैंकले ३५ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट मागेको थियो । त्यो ३५ लाख नै मैले दिएको हो । उसले भैँसेपाटीमा घर बनाउन थाल्यो । तर खासै पैसा थिएन । ठेकेदारलाई मैले आफैँ भेटेर काम कुनै हालतमा नरोक्नू, पैसा चाहिएको वेला मलाई भन्नू भनेको थिएँ । मैले कहिले लाख, कहिले ५० हजार पनि पैसा दिएर घरको काम अघि बढाइदिएँ । एउटा असल साथीका लागि यति गर्न पाउँदा म खुसी नै थिएँ । तर त्यति दु:खले बनाएको घर चरीले भोग्न पाएन । खुश्बुलाई दिन उसले प्रहरी अधिकृत माधव थापासँग ऋण लिएको थियो । त्यही पैसा तिर्न उसले थापालाई घर बुझाएको छ भन्ने सुनेको छु । सत्य के हो, खुल्दै जाला ।
तपाईं खुश्बुजस्ती गर्लफ्रेन्ड पाएर खुसी नै हुनुहुन्थ्यो, दु:ख कहाँबाट सुरु भयो ?
एक दिन मैले खुश्बुलाई लिएर अन्नपूर्ण होटलमा गएको थिएँ । चरी र मेरो हिमचिम निकै बाक्लो थियो । त्यसैले दुईजनाको परिचय गराइदिएँ । चरीले भाउजू नमस्ते भन्यो । खुबै रेस्पेक्ट पनि गर्‍यो । एक दिन खुश्बुको घरमा पनि दिनेशलाई लिएर गएँ । उसलाई देखेर खुश्बुका बुबाआमा, दाजुभाउजू सबै दंग पर्नुभयो । तर देवरभाउजू भन्ने चरी र खुश्बुको सम्बन्ध बढेछ । मैले लामो समयसम्म पत्तै पाइनँ ।
पहिलोपटक कसरी थाहा पाउनुभयो ?
धेरै पुरानो कुरा पनि होइन । ६ महिनाअघि म कामको सिलसिलामा दिल्लीमा थिएँ । खुश्बु र मेरो बीचमा असाध्यै राम्रो समझदारी थियो । हामी एक–अर्काका फेसबुक चलाउँथ्यौँ । एकदिन उहाँले अस्ट्ेरलियाको एकजना साथीसँग च्याट गर्नुभएको रहेछ । त्यसमा लेखिएको थियो Whatawaste of time it was, I was having relation with suchadumb person for 8 long years. But now I am in love with Dinesh Adhikari Chari. He is so romantic and our love is on the air. यो संवाद देखेर म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । त्यो वेला मैले आँखा देखिनँ । यो संसारमा विश्वास भन्ने चिज केही नै हुँदो रहेनछ भन्ने लाग्यो । खुश्बुलाई जथाभावी गाली गरेँ ।
तपाईंलाई छोडेर खुश्बु किन चरीतिर लागिन् ? तपाईंले गाली गर्दा केही त भनिन् होला ?
आठ वर्षमा मैले खुश्बुलाई गाली गरेको त्यो नै पहिलो र अन्तिमपटक थियो । तँसँग मैले धेरै दु:ख पाएँ । चरीसँग खुसी छु भनेर झन् ठूलो स्वरले कराउनुभयो । म छक्क परेँ । मसँग खुसी हुनुहुन्थेन भने रामै्र तरिकाले घोषणा गरेर चरीसँग जान सक्नुहुन्थ्यो । तर मलाई विश्वासघात गर्न जरुरी थिएन, मैले आक्रोश पोखेँ । मैले गाली गरेको कुरा उहाँले चरीलाई पनि भन्नुभएछ । चरीले मलाई फोन गर्‍यो । उसले मलाई मार्छु भन्यो । मैले पनि तँलाई मार्छु भनेँ । हामीबीच निकै नराम्रो भनाभन भयो । त्यसपछि दुवैजनासँग मेरो सम्बन्ध समाप्त भयो । खुश्बुको व्यवहारले मभन्दा बढी मेरा बुबाआमा दु:खी हुनुभयो । जसलाई उहाँले आठ वर्षसम्म बुहारी मान्नुभयो । मलाईभन्दा बढी विश्वास गर्नुभयो, उसैले यति ठूलो विश्वासघात गरी र अहिले यति ठूलो आरोप लगाइरहेकी छ भन्दा उहाँहरूले विश्वास गर्न सक्नुभएको छैन ।
तर, तपाईं यौन व्यवसायी महिलाहरूसँग घरमा बसेका वेला खुश्बु आइन् र रंगेहात फेला पारेपछि तपाईंहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको हो भनेर उनले भनेकी छिन् नि ?
त्यो सबै चरीको योजनामा भएको थियो । चरीले नै एक दिन मेरा साथीहरू छन्, जमघट गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि मैले नारायणथानको घरमा पार्टी राखेको थिएँ । केही महिला साथी मेरो घरमा पठाएर उसले खुश्बुलाई फोन गरेछ । भाउजू दाइ त साह्रै बिग्रिनुभयो, हेर्न जानुस् भनेछ । एसपी भोगबहादुर थापा र खुश्बु छिमेकी हुन् । त्यसैले थापाकी श्रीमतीलाई समेत लिएर अचानक खुश्बु मेरो घरमा आउनुभयो । उहाँ एक्कासि कराउन थाल्नुभयो । त्यहाँ एकछिन नाटक नै भयो । म पनि नर्भस भएँ । तर, खुश्बुलाई सम्झाउनु मेरो कर्तव्य थियो । त्यसैले यहाँ हल्ला नगरौँ बेइज्जत हुन्छ भनेर फकाउँदै उनलाई गाडीमा राखेर अन्तै लगेँ । तर यो सब चरीले योजनाबद्ध रूपमा गरेको थियो भन्ने थाहा पाउन मलाई धेरै समय लाग्यो ।
अर्पण, खुश्बु र चरीको त्रिकोणात्मक प्रेममा प्रहरी अधिकृत कुमोध ढुंगेल कहाँबाट आइपुगे ? उनको नाम किन विवादित छ, यति धेरै ?
खुश्बु र मैले बालसुधारगृह चलाएका थियौँ । कुमोध दाइ दरबारमार्गमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा भेटिएका बालबालिका हाम्रो सुधारगृहमा पठाउनुभएको थियो । त्यही क्रममा हामी तीनजनाको चिनजान भएको हो । उहाँले एक दिन खुश्बुलाई चरीसँग दरबारमार्गमा देखेपछि छक्क पर्नुभएछ । तिमीजस्तो असल मान्छे त्योजस्तो गुन्डाको पछि किन लाग्छ्यौ, तिम्रो भविष्य बिग्रिन्छ भनेर उहाँले सम्झाउनुभएको रहेछ । तर, खुश्बुले सल्लाह मान्नुको सट्टा सबै कुरा चरीलाई भन्नुभएछ । त्यसपछि चरीले पनि कुमोध सरलाई आफ्नो दुश्मन ठान्न थालेको हो ।
पैसा खर्च गरेर प्रहरी परिचालन गर्ने र कसैको इन्काउन्टर गराउन सक्ने हैसियत तपाईंसँग छ कि छैन ?
पहिलो कुरा त कुनै व्यक्तिले पैसा खर्च गर्दैमा देशको प्रहरी संगठन र सरकारले मान्छे मार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दोस्रो कुरा, चरीमाथि भएको प्रहरी कारबाही जायज हो कि होइन भन्ने विषयमा फैसला गर्ने हैसियत पनि मेरो छैन । तेस्रो कुरा, मेरो परिवार ठिकैसँग चलेको छ । तर, त्यति धेरै पैसा छैन । किनकि खुश्बुलाई अक्सफोर्डमा पढाउँदा, उहाँलाई देश–विदेश घुमाउँदा मैले कलंकी, बालकोट र बिजुलीबजारमा तीनवटा घर बेच्नुपर्‍यो । तैपनि खुश्बुले माया गरुन्जेल म दु:खी थिइनँ । उनीहरूले नै मलाई दु:खी बनाए ।
« Reply #21 on: August 20, 2014, 03:11:00 AM »
बाँचेको भए फिल्मको हिरो बन्ने योजनामा थिए ‘चरी’
अपराधको क्षेत्रमा कुख्याति कमाएका गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरी चलचित्रको नायक बन्ने अभियानमा समेत लागेको खुलासा भएको छ ।
झट्ट सुन्दा आश्चर्य लागे पनि आफैँ लगानी गरेर सिने हिरो बन्ने ताकमा थिए ‘चरी’। जसको खुलासा गरेका छन्, नेपाली चलचित्रका कुशल चलचित्र लेखक शिवम अधिकारीले ।
शिवमलाई भेटेर नै चरीले नयाँ चलचित्रको कथा तयार पारिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए । सोहीक्रममा चारपटकसम्म कथाको बारेमा छलफल समेत भएको शिवमले बताए ।
इन्काउन्टरमा पर्नुभन्दा केही दिन अगाडिसम्म पनि शिवम र चरीबीच यही विषयमा छलफल भएको थियो । चरीकै आग्रह अनुसार, शिवले कथा पनि लेख्न सुरु गरेका थिए । ‘तर जसको लागि कथा तयार पार्दै थिएँ उही मरेको खबर सुनेपछि झसङ्ग भएँ,’ शिवमले भन्छन् ।
समयले साथ दिएमा चलचित्र निर्माणसँगै आफू पनि सिनेमाको हिरो बन्ने इच्छा चरीले व्यक्त गरेका थिए। शिवमसँग चरी भन्ने गर्थे, ‘जिम गरेर शरीर बनाएपछि हिरो बन्न त बेरै लाग्दैन नि, कि कसो ?’ तर, शरीरका मांशपेसी फुलाएर चलचित्रको हिरो बन्ने चरीको सपना इन्काउन्टरसँगै उडेर गएको छ।
शिवमका अनुसार चरीले चलचित्रको पूरै जिम्मा लिइदिन समेत आग्रह गरेका थिए। तर, आफूले त्यो जोखिम उठाउन नचाही लेखनको मात्र पारिश्रमिक लिने कुरा चरीलाई बताएका शिवले बताए ।
‘म व्यावसायिक चलचित्र लेखक हुँ। कसको पछाडि को छ या कसको विगत के हो, त्यो खोतल्ने मेरो काम पनि होइन। यस्तो कथामा चलचित्र लेख भनेपछि मैले आफ्नो पारिश्रमिक लिएर चलचित्र लेख्ने हो,’ लेखक अधिकारीले भने।
नेपाली सिनेमाका प्रशंसक मात्र नभई उनी चलचित्रका नियमित दर्शक पनि थिए, उनी। हलमा नयाँ चलचित्र फेरिना साथ गोप्य रूपमा गएर नेपाली चलचित्र हेर्ने चरीको लत थियो।
« Reply #22 on: August 20, 2014, 09:39:15 PM »
मैले अर्पणलाई बुढानिलकण्ठको घरमा ४ जना केटीहरुसंग नग्न अवस्थामा भेटेपछि छाडेको हुँ – खुस्बु
रहरी कारवाहीमा मारिएका भनिएका डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’कि प्रेमिका खुस्बु ओलीले मिडिया केही पनि नबुझी आफू विरुद्ध खनिएको आरोप लगाएकी छिन ।उनको पूर्व प्रेमि अर्पण कोइरालाले आफ्नो सात करोड रुपमा खाएको भनि गरेको प्रचार विरुद्ध आफै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनले अर्पणले मिडियाबाजी गरेका कुरा सबै बनावटी भएको दावी गरिन ।
उनले भनिन–अपर्णको काठमाडौमा तीन वटा घर नै थिएन । बिजुली बजारमा भएको घर बालकोटमा बनाउँछु भनेर बेचेको तर अन्तिममा सबै पैसा पोखराको ग्राण्ड क्यासिनोमा सक्यो । पछि मैले नै थप पैसा बुझाएर त्यहाँबाट छुटाएर ल्याएको हु । ओलीले आफू लामो समयदेखि भारतमा परिवारको उपचारमा भएको भन्दै मिडियाबाजी गरिरहेका अर्पण २१ दिन पहिले फर्पिङमा नै रहेको दावी गर्दै आफूले यसको प्रमाण समेत आवश्यक पर्दा पेश गर्ने बताईन ।
उनले आफू बुबाले जग्गा बेचेर सन् २००९ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न गएको र अर्पण कोइराला २०११ मा मात्र गएकोले उनको लगानीमा आफूले पढेको भन्ने कुरा वाईहात भएको दावी गर्दै बुबाले बेचेको जग्गा र आफूले तिरेको कलेज फि हेर्दा सबै कुरा प्रष्ट हुने बताईन । उनले भनिन–म निक ईन्स्टीच्यूटबाट बेलायत गएको हु । त्यहाँका सञ्चालक सुरज राजभण्डारीसँग बुझे पनि हुन्छ ।
ओलीले अर्पणसँग आफ्नो प्रेमसम्बन्ध भए पनि सन् २०११ बाट पूर्ण रुपमा टुटेको स्पष्ट पार्दै पछि लाख प्रयास गर्दा पनि गलत आदत नछाडेपछि सम्बन्ध टुटेको बताईन । उनका अनुसार आफू मिस टिन भएपछि नार्कोन नेपालले गरेको कार्यक्रममा अथिति हुँदा त्यहाँ उपचार गराईरहेका अर्पणसँग चिनजान भएको र पछि केही गर्छ भन्ने विश्वासमा सम्बन्ध बनेको हो ।
उनले भनिन–अर्पणलाई मैले भारत नयाँ दिल्लीको साईक्रयाटिक एण्ड रिहाविलिटेसन सेन्टरमा उपचार गराएको हु । तर पनि उ सुध्रेन नेपाल आए पछि पनि उस्तै पैसा उठाउँदै हिड्न थाल्यो त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो ।
ओलीले थपिन्–मैले उसलाई बुढानिलकण्ठको घरमा चार जना केटीहरुसंग नघ्न अवस्थामा प्रत्यक्ष भेटेपछि उसलाई छाडेको हुँ । जीवनमा व्यापार घाटा नाफा भनेको त भैहाल्छ तर उसको चरित्र नै खराब भएर मैले छाडेको थिएँ । उसले मेरो बुवासंघ लिएको पैसा पनि तिर्न सकेको छैन् । उसले दिएको चेक बाउन्स भएको छ।कार्यक्रममा ओलीले अर्पणले असराफ खानलाई सम्बोधन गरेर इब्राहिम दाउदलाई पनि ईमेल लेखेको भन्दै इमेलको स्क्यान कपी पत्रकारहरुलाई देखाएकी थिईन्।
अर्पणसँग सम्बन्ध टुटेको छ महिनापछि दिनेश अधिकारीसँग आफ्नो चिनजान भएको र सम्बन्ध बढ्दै गएको भन्दै आफूसँग सम्बन्ध हुँदा अधिकारीको नाममा कुनै उजुरी नभएको समेत प्रष्ट पारिन । उनले अधिकारीको सालिनताबाट आफू प्रभावित भएको र उसको प्रेम प्रस्ताव स्विकारेको समेत पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारिन ।
Khusbu Oli saw Arpan naked with four girls ... conspiracy ???
« Reply #23 on: August 22, 2014, 12:51:55 PM »
Turns out it is true
« Reply #24 on: July 02, 2018, 08:13:36 AM »
« Reply #25 on: July 02, 2018, 03:04:01 PM »